ဒဂုံ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် အရှေ့ဒဂံုစက်မှုဇုန် တွင် စက်ရုံ‌ေဆာက်ပြီး မြေကွက်အမြန် ငှားရန်ရှိသည် ။ - ငွါးရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း (Dagon Myothit (East)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - $0(အေမရိကန္ေဒၚလာ) - R-17750029 | iMyanmarHouse.com
Green Energy Real Estate Services ၏ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ဒဂုံ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် အရှေ့ဒဂံုစက်မှုဇုန် တွင် စက်ရုံ‌ေဆာက်ပြီး မြေကွက်အမြန် ငှားရန်ရှိသည် ။
Green Energy Real Estate Services ပိတ္ရန္
9 Dec 2019 5:34 pm တြင္ေၾကာ္ျငာတင္ခဲ့သည္
286 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး |	ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ R-17750029
စက္မႈဇုန္7ခန္း 10 ခန္း
$ 0.27 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ)
တည်နေရာ - ‌ဒဂုံ(အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ် ၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်
ဂိုဒေါင်အကျယ် - (၁၈၀ပေ*၃၀၀ပေ) ၂ထပ် (၁၀၈၀၀၀စတုရန်းပေ)
မြေအကျယ် - ၂.၅ ဧက
transformer - 400 KVA
အငှားဈေးနှုန်း - 1 sqft USD 1.27 ( ညှိနှိုင်း)
အထက် ပါအချက်အလက်များ ပါရှိပြီးစက်ရုံလုပ်ကိုင်ရန် ၊ ဂိုဒေါင် အသုံးပြုရန် စက်ရုံအင်္ဂါရပ် အသီးသီး နှင့်ပြည့်စုံသော စက်ရုံကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွန်တိန်နာကားများ၀င်ထွက်လွယ်ကူသော လမ်းမကြီးပေါ်တွင်တည်ရှိပါတယ် ။
GREEN ENERGY real estate services မှဖြစ်ပါတယ်နော် ။
လူကြီးမင်းအနေနဲ့ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ကတော့
(Today) The factory that our real estate will introduce today is from South Dagon Industrial Zone in South Dagon Township. Location - South Dagon Township, Yangon ,South Dagon Industrial Zone Warehouse size-(180ft*300ft )2RC (108000square feet)
Land size - 2.5 acre transformer - 400KVA
Rent price - 1sqft USD 1.27 (Negotiable) The above information is available and is available for factory operation. It isagreat factory with many factory features for use. It's from GREEN ENERGY real estate services. Contact us for more information 09452286665,09452286667 ***************************************
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ R-17750029 အတြက္ Green Energy Real Estate Services သုိ့ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
Ad Number R-17750029
Green Energy Real Estate Services
No-35(A), Thamine Train station Road,Kyaung shae Bus Stop,Mayangone Tsp,Yangon Myanmar.
Green Energy Real Estate Services ရွိ ငွားရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား
အ‌ေရှ့ဒဂုန် မြို့နယ်‌ အရှေ့အဂုံ စက်မှုဇုန်တွင်အရမ်းတန်သော စက်ရုံ အသန့် အမြန် ငှား...
ရွှေပြည်သာဇုန်၁တွင် ဂိုဒေါင်ငှားရန်ရှိသည်၊၊ လမ်းကောင်းပီးသွားလာရလွယ်ကူသည်၊၊
လှိုင်သာယာမြို့နယ်‌ ရွှေသံလွင် စက်မှုဇုန်တွင်စက်ရုံ အသစ် အမြန် ငှား ရန်ရှိသည် ။
Green Energy Real Estate Services ရွိ ေရာင္းရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား
ဇေကမ္ဘာစက်မှုဇုန်တွင် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်၊၊
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပုလဲလမ်းတွင် ဂိုဒေါင်ပါမြေရောင်းရန်ရှိသည်၊
ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ငွါးရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား
12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ)
အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုံတွင် မြေ+ဂိုဒေါင် ငှားမည်
130 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ)
💢🏠စက္မႈ႔ဇုန္ ဂိုေဒါင္ ငွားမည္။🏠💢
80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ)
ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ငွားရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားအားလုံး ၾကည့္႐ႈရန္ ဤေနရာကုိႏွိပ္ပါ